Tababare Wenger oo ka hadlay hogaaminta horyaalka - BBC News Somali
Tababare Wenger oo ka hadlay hogaaminta horyaalka
3 Febraayo 2016
Lahaanshaha sawirka EPA
Maamulaha Arsenal, Arsene Wenger wuxuu qirtay in kooxdiisu hadda tahay mid eryanaysa kooxda hogaanka u ah tartanka premiership-ka Ingiriiska kadib markii ay barbarro 0-0 ah ku kala baxeen kooxda Southampton.
Kooxda Gunners wax guul ah ma gaarin afartii kullan ee ugu dambaysay, iyagoo ku guuldaraystay in ay goolba dhaliyaan 3-dii kullan ee ugu dambeeyay. Kaalinta afaraad ayay kaga jiraa kala horaynta dhinaca dhibcaha ee kooxaha.
"Waa in aan soo gaarnaa, barnaamijkeenuna wuu culus yahay, gaar ahaan markaan ku cayaarayno dibedda,” Ayuu Wenger u sheegay bogga rasmiga ah ee naadiga.
"Waxaa u baahan nahay hadda in aan si deg deg ah natiijo uga keenno kulamada dibedda.
Arsenal waxay badisay mar kaliya sanadkan, iyadoo 3-3 barbarro ah la gashay kooxda Liverpool, 0-0 ay ku kala baxeen Stoke iyo Chelsea oo 0-1 kaga badisay garoonka Emirates.
Mar la waydiiyay in uu ka walwalsan yahay in kooxdiisa xilligan ay hoose u sii dhici doonto, wuxuu yiri: “wali lama gaarin xilligii la ogaan lahaa taa, waa run in bilowgeena 2016 uusan wanaagsanayn.
“Hoos u dhaca wayn wuxuu nooga yimid laba cayaarood oo garoonkeena ka dhacay. 10 cayaartoy ayaan ku cayaaraynay dhamaan cayaarteenii Chelsea, maantana toban fursadood ayaan abuurnay, balse kama faa’iiday oo waxba ma dhalinin.”
Guusha Leicester ay 2-0 kaga badisay Liverpool waxay la macne tahay in ay hogaanka sii haynayso, iyadoo Arsenal ay ka sii hoos martay Manchester City iyo Tottenham, oo shalay ka kala badiyay Sunderland iyo Norwich.